Dr. Tint Swe's Writings: Allergy medications (အလာဂျီ) ကို ဘယ်လို ကုသမလဲ
မင်္ဂလာပါဆရာ။ အသက် ၄ဝ၊ အမျိုးသမီး၊ အပျိုကြီးပါ။ ပင်လယ်စာတွေစားမိရင်း အသားယားအဖုအပိန့်ထွက်တာ မပျောက်လို့ ဆေးခန်းလဲသွားပြပါတယ် မသက်သာပါ။ လုပ်ငန်းခွင်မို့ ကုတ်ရခက်ဖဲ့ရခက်မို့ပါ။ တလနီးနီးရှိနေပါသည်။ လေးစားစွာဖြင့် မေးကြားပါသည်ဆရာ။
(အလာဂျီ) ဆိုတာ ရောဂါလက္ခဏာတခု ဖြစ်တယ်။ ရောဂါမဟုတ်ပါ။ ဘာလို့ဖြစ်လာရသလည်းဆိုတာကိုရှောင်နိုင်မှ မဖြစ်မှာ။ မတည့်တာနဲ့ထပ်တွေ့ရင် ထပ်ဖြစ်မယ်။ ဘာနဲ့မသင့်လည်း မသိတာကများတယ်။ ဆေးနည်းတွေ အများကြီး ရှိတဲ့ထဲက ကိုယ်နဲ့သင့်တာ ရွေးရပါမယ်။ ဆေးတွေဟာ မတည့်တဲ့ဓါတ်ကို ခန္ဓာကိုယ်ကနေ တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တာကို တားပေးတယ်။ တနည်းအားဖြင့် ရောဂါလက္ခဏာဖြစ်စေတဲ့ (ဟစ်တမင်း) ဓါတ်ထွက်တာကိုတားတယ်။ ဆေးလုံး၊ ဆေးရည်၊ နှာခေါင်းပန်းဆေး၊ မျက်စဉ်း၊ လိမ်းဆေးနဲ့ ထိုးဆေး အမျိုးမျိုးရှိတယ်။
Emergency epinephrine shots အရေးပေါ် ထိုးဆေး၊ သိပ်ဆိုးတဲ့သူတွေကို Epinephrine ဆေးထိုးတယ်။ Self-injecting syringe and needle (Autoinjector) devices = Twinject, EpiPen နဲ့ EpiPen Jr. တွေက အရေးပေါ် အတွက် ဆေးထိုးရလွယ်အောင် လုပ်ထားတာတွေ ဖြစ်တယ်။ သွားလေရာ ယူသွားနိုင်တယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိပေမဲ့ သုံးနေကြရတယ်။
1. Allergic Rhinitis အလာဂျီ နှာခေါင်း http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2010/08/allergic-rhinitis.html
2. Allergy - Urticaria - Hives အင်ပြင် ထွက်ခြင်း http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/11/urticaria-hives.html
3. Allergy and Worm နာတာရှည် (အလာဂျီ) နှင့် သန်ကောင် http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2010/09/chronic-allergies.html
4. Allergy Medications (အလာဂျီ) ကို ဘယ်လို ကုသမလဲ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/05/allergy-medications.html
5. Allergy Relief Kit (အလာဂျီ) ရှေးဦးသူနာပြု ဆေးအိတ် http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2012/04/allergy-relief-kit.html
6. Allergy testing (အလာဂျီ) စစ်ဆေးခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/allergy-testing.html
7. Allergy to Eczema မတည့်တာနဲ့ နှင်းကူနာ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/allergy-to-eczema.html
8. Allergy Triggers (အလာဂျီ) ရစေတတ်တဲ့ အကြောင်းတရား (၁ဝ) ပါး http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2012/03/10-common-allergy-triggers.html
9. Allergy သို့မဟုတ် မတည့်အတူနေ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2010/05/allergy.html
10. Cetrizine (အလာဂျီ) ဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/cetrizine.html
11. Hives အင်ပြင် ထွက်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hives.html
12. Mango Skin Allergy သရက်သီးခွံ အလာဂျီ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/mango-skin-allergy.html